Vokatra famonoana bibikely China ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy Pyriproxyfen | Senton
Vokatra famonoana bibikely ho an'ny Pyriproxyfen
Anaran'ny vokatra Pyriproxyfen
CAS No. 95737-68-1
MOL File 95737-68-1.mol
Teboka mitsonika 45-47 ° C
Fonosana: 20KG / Amponga, na amin'ny fitakiana Custimised
Famokarana: 500 taonina / volana
Kaody HS: 2933399026
Pyriproxyfen izay hita fa mandaitra amin'ny karazana arthropoda maro karazana dia benzyl ethers manakorontana mpandrindra ny fitomboan'ny bibikely.Ny hormonina tanora dia analogue vaovao bibikely, miaraka amin'ny hetsika famindrana ny fandraisana, ny fanapoizinana ambany, ny fikirizan'ny lava, ny fiarovana ny vokatra, ny fanapoizinana ambany ny trondro, ny fiatraikany kely amin'ny toetran'ny tontolo iainana. Ho an'ny bibikely fotsy, bibikely moka, samoina, bitro misy tafika, Spodoptera exigua, pear psylla, thrips, sns dia misy vokany tsara, fa ny vokatry ny lalitra,moka ary ny bibikely hafa dia tsara vokatry ny fanaraha-maso.
Acetone insolubles: 0,5% max
amin'ny rijan- 95% TC, 100g / l EC, ME 5%
Fisorohana zavatra Thrips, Planthopper, bitika mitsambikimbikina, kankana miaramila bitika, kankana tafika sigara, manidina, moka Fomba fiasa Bibikely Mpandrindra fitomboana
habetsahan'ny poizina LD50 am-bava marary am-bava ho an'ny voalavo> 5000 mg / kg.
Ny hoditra sy ny maso LD50 percutaneite maranitra ho an'ny voalavo> 2000 mg / kg. Tsy mahasosotra ny hoditra sy ny maso (bitro). Tsy mpanelingelina amin'ny hoditra (kisoa ginea).
Inhalation LC50 (4 h) ho an'ny voalavo> 1300 mg / m3.
Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny FIASANA MAHOMBY Famonoana bibikely agrochemical Imidacloprid, Fly Mamono ny vokany tsara Thiamethoxam, Pyriproxyfen famonoana bibikely agrochemical ,Mpitsara fitomboan'ny zavamaniry sy ny sisa.Ny orinasanay dia orinasam-barotra iraisam-pirenena manana traikefa manankarena, raha afa-po amin'ny vokatray ianao, azafady mifandraisa anay raha vantany vao azo atao.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy totozy voalavo sy saka alika? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny Pyriproxyfen rehetra dia misy fiantraikany amin'ny atiny. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina izay misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny bibikely. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Teo aloha: Liquid Pesticide Propyl dihydrojasmonate
Manaraka: Permethrin Mamono bibikely amin'ny fomba mandaitra
Heptafluthrin mamono bibikely amin'ny tany?
Ny Deltamethrin malaza indrindra sy bibikely
Tsara kalitao be mpampiasa
Stock stock 35575-96-3 Azamethiphos Miaraka Amin'ny Vidiny Tsara indrindra
Fanaraha-maso ny bibikely Beta Cypermethrin
Cyromazine famonoana bibikely be mpampiasa